IMontes Universales, konke odinga ukukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngolunye uhla lwezintaba olubaluleke kakhulu eNhlonhlweni Yase-Iberia. Imayelana ne- Izintaba Zomhlaba Wonke. Kuyinto uhlelo lwezintaba olusemkhawulweni oseningizimu-mpumalanga wohlelo lwe-Iberia. Ukunwetshwa kwayo kuhlanganisa ingxenye enkulu yesifunda sase-Aragonese, iSierra de Albarracín eTeruel nendawo eseningizimu-mpumalanga ye-Alto Tajo, phakathi kweGuadalajara neCuenca. Yindawo eyaziwa kahle ngemizila yayo eminingi yokuhamba izintaba kanye nezokuvakasha zasemakhaya.
Kulesi sihloko uzofunda ngezici nokwakheka kwezintaba ze-Universal kanye nenye yezindlela ezihamba phambili zokuhamba izintaba ongazenza. Ufuna ukwazi okwengeziwe? Sichaza konke lapha.
2 IMontes Universales, lapho kuzalwa khona iTagus
3 Umzila odabula izintaba zomhlaba wonke
4 Usuku lwesibili lomzila
Izintaba ze-Universal zinezici ezithile ezinamandla kakhulu zezindawo ezinezintaba zaseSpain. Iziqongo enazo phakathi kwamamitha ayi-1.600 1.935 no-XNUMX ukuphakama. Kulezi zintaba kukhona umthombo womfula iGuadalaviar. Lo mfula waziwa ngokuthi yiTuria uma ujoyina umfula i-Alfambra edolobheni laseTeruel.
Zonke izintaba ezikulesi simiso zihlelwe enyakatho-ntshonalanga kuya ngaseningizimu-mpumalanga ngaphakathi kwe-arch yangaphakathi yase-Iberia. Enyakatho-mpumalanga inqamula i-Caimodorro massif, iminyaka yayo ilinganiselwa ukuthi ivela ePaleozoic. Ngaphezu kwalokho, futhi kunqamula iLoma Alta de Villar del Cobo. Ngaseningizimu-mpumalanga, zishayisana nentaba yaseCuenca futhi empumalanga nesigodi iGuadalaviar.
Sise-hydrography yayo emfuleni obalulekile we-Alto Tajo. Yazalelwa esifubeni seMountain Mountains futhi, ngenxa yalesi sizathu, idume impela. UMfula iTagus mkhulu kunayo yonke inhlonhlo yonke. Futhi banamaLevantines akha iTuria neJúcar.
Ngokuqondene nobubanzi bezintaba zayo, zakhiwa ungqimba oluqhamuka ku Mesozoic. Ezinye izindawo zinamathafa e-limestone asuka eJurassic ane-karstification eningi. Indawo yaseKarst yaziwa kakhulu ngokwakhiwa kwayo okwehlukile. E-Loma Alta nase-Griegos sithola ukwanda kwezinkundla zamasinki nama-lapiaz.
Eningizimu ye-nucleus yePaleozoic amanye ama-syncline wamathebula weCretaceous Origin ahambelana. Amanye ama-cornices ane-calcareous karstified ayabonakala futhi ehla enqamula ezingxenyeni zesigodi esinjengombeleko, ngenxa yokwakheka kobuzwe. Ku-karst nucleus sithola ama-sinkholes acwilayo anezindawo ezithile zemifula. Inhloko yalezi zifundo isezintabeni i-Universal.
IMontes Universales, lapho kuzalwa khona iTagus
Akukhona nje ukuthi umfula iTagus wazalelwa eMontes Universales (eyaziwa ngokuthi yinde kunazo zonke kuyo yonke inhlonhlo) kodwa futhi iCabriel neGuadalaviar. Lokhu kwenza Izintaba i-Universal zihlose ukuvakasha ngezindawo zokubaleka zasemakhaya, izintaba kanye nezokuvakasha zokongiwa kwemvelo. Ukuqasha kunamakamelo amaningi ongachitha ngawo izimpelasonto ezinhle nomndeni nabangane, imizila emikhulu emihle nendawo ephelele yokujabulela imvelo futhi ususe izibopho.
Kulezi zindawo, ukwakhiwa kwendabuko kugqamile, okusisusa ezindaweni zanamuhla. Singabona imisebenzi emikhulu kojantshi, izindawo ezibukeka zishintsha izimfunda namahlathi ephayini, njll. Ngaphezu kwalokho, transhumance kwakwenziwa ezikhathini zasendulo. Lesi sakhiwo sisezweni ngokuvumelana sibonga imisipha nemifinyela ebangela amafomu amahle ngempela. Kuyafaneleka ukuphumula futhi ujabulele imvelo.
Kukhona neminyuziyamu, ukunambitheka kwezibiliboco eziningi zendawo, nezindlela zokuhamba izintaba namabhayisikili emaphandleni. Sizochaza ngokuningiliziwe ngomunye wemizila ehamba phambili engenziwa ngezintaba i-Universal.
Umzila odabula izintaba zomhlaba wonke
Umzila uhlala ngempelasonto ephelele. Isiphakamiso sokuqala umzila odlula eMirador del Portillo. Singashiya imoto sihambe siye endaweni yokubuka enesimo. Itholakala ekuphakameni kwamamitha ayi-1.800, okuzosinikeza izindawo ezinhle zemvelo nakho konke okuzungezile. Kusukela kuleli phuzu, singakwazi futhi ukubona amanye amaphuzu wokuthakazelisa ngenxa yokuba khona kwamapaneli akhombisayo asikhombisa lapho kufanele sigcizelele khona ukubona kwethu.
Siqhubeka nomgwaqo wehlele esigodini saseTagus. Kule ndawo sithola ukushintshana kwamadlelo namahlathi ephayini. Isiteshi lapho kuzalwa khona uMfula iTagus sibhalwe uphawu futhi siyabona eduze. Leli phuzu lapho umfula uqala khona ukuthola iminikelo yawo yokuqala yamanzi okwesikhashana. Yize kubalwa njengomthombo weTagus, awukwazi ukubona indawo ezinzile yomfula, kepha kungumnikelo wokuqala wamanzi ozoqala ukugeleza usuka kuleyo ndawo uze uhambe amakhilomitha angama-1072 kulo lonke elaseSpain uze ufike eLisbon.
Siyaqhubeka nokuhamba ngomgwaqo sibheke eFrías de Albarracín. Sihamba amakhilomitha ama-3 ngaphambi kokufika edolobheni futhi sikuthola unamahlathi aphayini abukeka njengembobo enkulu emhlabathini. YiSima de Frías. Izindonga zivikelwe ngocingo lwamapulangwe. Ingamamitha angama-80 ububanzi futhi ingamamitha angama-60 ukujula. Uma sifuna ukuyibona kahle ngokuphelele, kufanele siyizungeze.
Ntambama sizoba nohlelo oluzolile. Sizovakashela idolobha lamaGrikhi nayo yonke imvelo. Ingenye yezindawo eziphakeme kakhulu kuyo yonke inhlonhlo. Ingamamitha ayi-1600 ukuphakama. Uzozithola uzungezwe ngokuphelele yizindawo ezinotshani lapho kunezinkomo eziningi khona.
Usuku lwesibili lomzila
Saqala ukuyofuna iCampo de Dolinas de Villar del Cobo. Sizobona ukucindezeleka okukhulu okungamamitha angama-350 namamitha angama-50 ukujula ngezimila ezincane. Lezi zilinganiso ziyamangaza ngisho nekhamera engeke ikwazi ukuthatha yonke into.
Singagcwalisa ukusa ngokuvakashela iTrashumacia Museum etholakala maphakathi nedolobha laseGuadalaviar. Ukuqeda impelasonto, sizovakashela idolobha laseVillar del Cobo lapho singabona khona izibonelo zobuciko bendabuko obunezingilazi ezicakiwe futhi lapho kusebenza khona i-ironwork.
Ngiyethemba ukuthi ngalezi zeluleko ungayijabulela impelasonto enhle ezintabeni ze-Universal.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » Izintaba Zomhlaba Wonke